Prometheus In The New Age: ဖောက်ထွက်တွေးခြင်း ဒဿနပုံပြင်
ကျနော်အခုတလော အများဆုံးကြားကြားနေရတဲ့ စကားလုံးကတော့ “ ဖောက်ထွက်တွေးခြင်း ” ဆိုတဲ့ စကား လုံးပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘဘဦးဝင်းတင်ကလဲ အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ ထွက်ပေါက်ကိုသာ မစဉ်း စားဘဲ ဖောက်ထွက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာကို သတိရပါတယ်။ အခုလည်း ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင်ကြီးတို့ ရဲ့ မတော်မတရား ဖိညှပ်ထောင်ချောက်ဆင် အကြပ်ကိုင်မှုကြောင့် “ ဖောက်ထွက်စဉ်းစားနည်း ” ကိုသာ အသုံး ချရတော့မည့်အခြေအနေ၊ အကျပ်အတည်းကိုကြုံနေရပါသည်။ အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်သည့် အ ကျပ်အတည်းပါ။ ဒါပေမယ့် တွေးခေါ်၊ မြော်မြင်၊ ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းကတော့ ဒီအကျပ်အ တည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒီအကျပ်အတည်းအခြေအနေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နမူနာပုံပြင်တစ်ခုကို စာရေးဆရာကိုတာရဲ့ ဖြန့်ထွက်တွေးခြင်း (Lateral Thinking) စာအုပ်မှ မှတ်မိသမျှတင်ပြလိုက်ရပါသည်။ လိုအပ်သလို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီး မြန်မာတမျိုး သားလုံးနှင့်ပတ်သတ်တဲ့အရေးအတွက် အားဖြည့်ကူညီကြပါ။ ၀ိုင်းဝန်းကြပါ။ ညီညီညွတ်ညွတ်အဖြေရှာပေးကြ ပါ။
တခါက မိန်းမလှလေးနှင့်ငွေချေးသူရဟူဒီအဘိုးကြီးတစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်သည်။ မိန်းမလှလေး၏အဖေမှာ ကုန်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အဘိုးကြီးဆီမှငွေချေးပြီးကုန်ကူးရာငွေရှုံးပြီး ချေးငွေမဆပ်နိုင်။ ရဟူဒီလူကြီး က မိန်းမလှလေးကို အကြွေးနှင့်သိမ်းချင်၍ ဥာဏ်ဆင်ပုံမှာ ကျောက်ခဲအဖြူအမည်း ရွေးချယ်ရမည်။
(၁) ကျောက်ခဲအဖြူရွေးနိုင်လျှင် အကြွေးလျှော်မည်။ ကောင်မလေးကိုဘာမှမလုပ်။
(၂) အမည်းရွေးမိလျှင် အကြွေးတော့လျှော်မည်။ ကောင်မလေးကတော့ သူ့ကိုယူရမည်။
(၃) ဘယ်ဟာမှမရွေးပဲခေါင်းမာလျှင်မူ ဖအေကြီးကို တရားစွဲထောင်ချမည်။
ကောင်မလေးက ကျောက်ခဲရွေးပွဲလုပ်ရန်သဘောတူလိုက်သည်။ ကျောက်ခဲရွေးပွဲနေရာမှာလည်း ရဟူဒီလူကြီး ၏ ဥယျာဉ်အတွင်း ကျောက်စရစ်ခင်းထားသော လမ်းပေါ်မှာဖြစ်သည်။ ရဟူဒီလူကြီးက အိတ်တစ်လုံးယူ၍ လူအလစ်မှာ ကျောက်ခဲအနက်နှစ်လုံးကို အိတ်ထဲသို့ထည့်လိုက်ပြီး “ ကဲ … ရွေးပေတော့ ” ဟု မိန်းမပျိုကို ပြော သည်။ ကောင်မလေးဘာလုပ်မလဲ။ စဉ်းစားကြပါ။ သမာရိုးကျတွေးရိုးတွေးစဉ်အတိုင်းဆိုလျှင်တော့ ကောင်မ လေးလွတ်လမ်းမရှိ။
ကောင်မလေးဆီမှာ ရွေးချယ်စရာ လမ်း (၃) သွယ်ရှိသည်။
(၂) ကောင်မလေးက ရဟူဒီလူကြီးမတရားပုံကို ဖော်ထုတ်မည်။
(၃) ကျောက်ခဲအမည်းကို သိလျှက်ရွေးလိုက်ပြီး ဖအေကြီးကို ကယ်တင်မည်။
တကယ်တော့ ဘယ်လမ်းဖြစ်ဖြစ်မကောင်းပါ။ ကောင်မလေးအတွက် တကယ့်အကျပ်အတည်းပါ။
သာမန်အတွေးက ရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်မှာ စဉ်းစားသည်။ ကောင်မလေးက ရွေးသောကျောက်ခဲအပေါ်မစဉ်းစား။ တခြားဖောက်ထွက်နည်းကိုသုံးသည်။ ကောင်မလေးက အိတ်ထဲမှကျောက်ခဲကိုယူလိုက်ပြီး ခြေချော်လှဲချလိုက် ၍ လမ်းပေါ်မှအခြားကျောက်ခဲများထဲသို့ရော၍ အသာပစ်ချလိုက်သည်။ ရဟူဒီကြီးက အံ့အားသင့်၍ လက်ထဲမှ ကျောက်ခဲကိုမေးသောအခါ “ လက်ထဲကျောက်ခဲတော့မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အိတ်ထဲက ကျန် ခဲ့တဲ့ကျောက်ခဲကိုကြည့်ပေါ့။ အိတ်ထဲကကျောက်ခဲက အနက်ရောင်ဆိုရင် ကျမရွေးတာ အဖြူပေါ့ ” လို့ဖြေ လိုက်တယ်။ မိန်းကလေးကတော့ လက်ထဲက ကျောက်ခဲကို ဗဟိုမပြုဘဲ ကျန်ရစ်မည့်ကျောက်ခဲကို ဦးတည်၍ တွေးသောကြောင့် အဘိုးကြီးလက်မှ လွတ်ရသည်။
“ အကျပ်အတည်းကိုဖောက်ထွက်စဉ်းစားကြပါစို့ ….. ”
“ There is no dilemma compared with that of the deep-sea diver who
hears the message from the ship above,
‘ Come up at once. We are sinking. ”
Posted by အလင်းဆက် at 10:34 PM
Anonymous April 14, 2010 at 1:17 AM
လင်ကွန်း၏ ဂက်တီးစဘက် မိန့်ခွန်း
The Minutemen are turning in their graves
“အမနုဿ ဘေး “
မြတ်ဗုဒ္ဓ နှင့် ထူးခြားသော သင်္ကန်းချုပ်ပွဲကြီး
"ထလော့မြန်မာ၊ အိုမြန်မာတို "့
အောင်မြင်သူ နှင့် ကျရှုံးသူတို့၏ ကွဲပြားချက်များ.
သုခမိန် ပြောတဲ့ နိုင်ငံတော်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အဖိုးထိုက်တန်သော စကားတစ်ခွန်း